Gaalkacyo: Askari iyo haweeneey ku dhintay rasaas lagu furay goob dadku ku badan yahay. – Radio Daljir
Galkacyo, April 03 – Laba qof oo ay midi ahayd haweenay ayaa xalay dhintay kadib markii koox hubaysan ay goor fiidkii ah tacshiirad ku fureen waddo halbawle ah oo dhex-marta magaalada Galkacyo.
Qofka kale ayaa ahaa askari ka tirsan ciidamada ammaanka ee Puntland iyada oo dadka wax laayay ay rasaasta ka fureen afaafka hore ee xerada warshadda Galleyda ee Galkacyo. Qofka dumarka ah ayaa iyadu ka mid ahayd dad halkaa marayay.
Si rasmiya loogama oga jihada weerarka gaysatay. Hayeeshee, sarkaal ka tirsan ciidamada bilayska oo aan doonayn in magaciisa la sheego ayaa Radio Daljir u sheegay in ay ahaayeen rag ka soo tallaabay dhinaca xaafadda Wadajir ee koonfurta magaalada Galkacyo markii danbana ay u baxsadeen. Nooma suura-galin in aan warkaas ka xaqiijinno ilaha ammaanka ee maamul-goboleedka Galmudug.
Laba todobaad ka hor ayay ahayd markii sidaan oo kale rag hubsani meherado lagu caweynayey ay rasaas oodda uga qaadeen taas oo iyana sababtay dhimashada labo nin oo dhallinyaro ah iyo dhaawac tiro intaas ka badan.
Falka xalay dhacay ayaa la tilmaamay in uu ahaa mid lala bartilmaameedsanayey askariga ka tirsan ciidamada amniga ee Puntland waxana jira warar haddiiba la isla dhexmarayo oo dhacdadan la xiriirinaya hawl-gallo ciidamada nabad-galyadu shalay ay ka sameeyeen waddo u baxda dhinaca waqooyi ee magalada Galkacyo gaar ahaan agagaarka tuulada Beyra oo koox jid-gooyo ah oo kana soo jeedda koonfurta gobolka Mudug ay jid-gooyin dhigteen, kuna baarteen gaadiid iyo dad waddadaasi ku safrayey.
Hawl-galkaasi oo dhacay shalay galinkii danbe, waxaa lagu soo qabtay saddex nin oo ka mid ahaa raggii falalkaasi baarshada ah ka sameeyey jidka aada Beyra iyo Bursaalax, kuwaasi oo midkood uu ahaa dhawac xilligii ciidanku gacanta ku dhigeen, haatanna lagu daweynayo isbitaalka guud ee magaalada Galkacyo.
Falalka hadda soo cusboonaaday ee baarashada gaadiidka iyo galidda waddooyinka iskugu jira ayaa ah kuwo horay dhaw jeer uga dhacay waddooyin badan oo ah kuwa magaalada Gaalkacyo ka soo gala dhinaca waqooyiga, waxaana laga nastay arrimahaan kaddib markii dhawaan ay ka dhaceen isku dhacyo hubaysan oo dhiig badan ku daatay, sababna u noqday yaraansha is-dhaxgala iyo wada daaqista dadyawga gobolka deggan.
Tallaabooyinkan ayaa noqonaya imtixaankii ugu horeeyay ee soo food-saara heshiis dhinacayo badan oo amnigu ku jiro, kaasoo ay dhawaan kala saxiixdeen maamullada Galmudug iyo Puntland.